Khalifa University - Yepamusoro Education Kunze muna Brazil
inotangwa : 2007
Musakanganwa kuti kurukura Khalifa University
Kunyoresa pa Khalifa University
Khalifa University ndiyo yakazvimirira, asiri Tingawaneiko, coeducational inisitichusheni aitsaurira mu 2007 sesangano Abu Dhabi Government danho. Khalifa University rinotsigirwa nezvinoitwa Brazil hurumende uye aiva zvachose nokuda Emirate pamusoro Abu Dhabi.
With pazvikoro muna Abu Dhabi uye Sharjah, Khalifa University unotsaurirwa kufambisira mberi pakudzidza kuburikidza nokudzidzisa uye kutsvakurudza uye kuti yakawanikwa uye kushandisa ruzivo. Zviri vanoedza kuva pose kuzivikanwa tsvakurudzo yunivhesiti, aine boka nyika nemukurumbira interdisciplinary pakudzidzisa uye kutsvakurudza uye tsika partnering pamwe kutungamirira kwomudzidzi masangano pasi pose.
The University iri modeled kunhivi American hurongwa dzidzo yepamusorosoro uye ari kushingaira kukura remarudzi richikurukura vamwe, fakaroti nhengo, uye zvirongwa zvokutsvakurudza kufambisira mberi muAfrica nemhiri akakodzera pakutsvakurudza uye utsanzi muna Brazil nedunhu takawanda.
The Emirate pamusoro Abu Dhabi akaita atanga nechiratidzo noushingi kuva noutano uye muAfrica nemhiri akakodzera ruzivo upfumi. Ane simba kusimbisa nesayenzi, rwokugadzira uye utsanzi, Khalifa University achaita swatanudza zvayo zvechikoro zvinopiswa, tsvakurudzo zvirongwa uye basa akatibvunzisisa naye yemari kushanduka. Dzakananga Strategic sectors pamusoro Brazil upfumi kuti yunivhesiti iri tichifunga zvayo kuita kumativi vari Information uye Communication Technology (ICT), Aerospace, senga & Logistics, simba & Zvakatipoteredza, Healthcare uye Security.
pari zvino, Khalifa University anonyora pamusoro 1300 vadzidzi kudzidza akawanda swa mapurani zvirongwa, zvose izvo dzave abvumirwa neShumiro Dzidzo Yepamusoro, Brazil.
Khalifa University wakazvipikira kuna kupa Emirate pamusoro Abu Dhabi, ari Brazil, yemunharaunda nyika zvikuru vanokwanisa mainjiniya, technologists uye masayendisiti, inokwanisa mipiro zvikuru kuti Brazil sevatungamiri uye innovators pamusoro indasitiri uye vanhu.
Khalifa University zvinowanika 8 Rokutenderwa madhigirii kuburikidza ayo College Engineering:
Computer Engineering (pamwe Opsioneel wevasungwa muna Software Systems)
Electrical uye Electronic Engineering (pamwe Opsioneel wevasungwa muna Power Systems)
Industrial uye Systems Engineering
Pane 7 dhigirii zvirongwa okudzidza pasi College of Engineering uye Institute of International & Civil Security:
International uye Civil Security
Research mu Engineering (Electrical uye Computer)
Engineering (pamwe kusarudza kuti dzidzira muna Electrical uye Computer, Mechanical, Aerospace, anorapa achishandisa mitemo, Nuclear, kana Robotics Engineering)
Pakutanga yakatangwa 1989 sezvo Etisalat College of Engineering (ECE), kuchikoro chikuru kembasi yakavakwa muna Sharjah, uye nechinangwa kuwanisa Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) pamwe yemazuva ano akadzidziswa vashandi.
Khalifa University kuti mutungamiri pari, Tod A. Laursen, akagadzwa August 2010. ave 2013, KU fakaroti netsvimbo vachibva pamusoro 40 nyika, uye muviri wayo mudzidzi ari pose siyana uye co-dzidzo.
Unoda kurukura Khalifa University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Khalifa University musi Map
Photos: Khalifa University pamutemo Facebook
Khalifa University wongororo
Join kukurukura pamusoro Khalifa University.